Agụ na-ele ma ọ bụ usoro na-agụ. Nhọrọ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Agụ na-ele ma ọ bụ usoro na-agụ. Nhọrọ
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akwụkwọ, Black akwụkwọ, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
Ọ dịghị oge dị ka okpomọkụ na jisie ike gụọ ma ọ bụ mmegharị gị na obere ihuenyo. Ha dị ole na ole na ọtụtụ na nzaghachi nzaghachi nke na-eme n'etiti akwụkwọ na fim ma ọ bụ telivishọn. Na n'oge ndị a, ma ọ bụ na-enweghị ọnọdụ pụrụ iche, nke ikpeazụ na-enweta mmeri site na teknụzụ na ọnụọgụ nke ihe a na-eme na sinima. Nke a bụ nhọrọ m (obere) nke usoro 4 na imeghari oru site na ndi dere dika odi nkpa dika ala nna María Dueñas na Fernando J. Muñez na ndi america Harlan Coben na Michael Connelly.
1 Onye osi nri nke Castamar - Fernando J. Muñez
2 Ọnwụ - María Dueñas
3 Onye na - eme ihe ojoo - Harlan Coben
4 Bosch (Oge 7) - Roomlọ Na-ere Ọkụ - Michael Connelly
Onye osi nri nke Castamar - Fernando J. Muñez
Fernando J. Múñez enweghị ike ime nke ọma. Ya ọrụ edemede malitere na 2002 na ụwa nke akwukwo umuaka na umuaka, ebe o nwere ogologo akụkọ ihe mere eme, afọ abụọ gara aga o bipụtara akwụkwọ akụkọ mbụ ya maka ndị okenye, Onye osi nri nke Castamar, na nnukwu ihe ịga nke ọma nke na e were ya na telivishọn, na-aghọrọ onye ọzọ dị ka ya. Afọ a egosila Nzọụkwụ iri ahụ.
Ma ka anyị kwuo mmegharị gị, nke 12 isi, O nwekarịrị n'efu n'efu n'ihe gbasara edemede mbụ, ihe na - emekarị n'akụkụ nke ọzọ. Otú ọ dị, ndị kpachapụ anya na mmepụta telivishọn, nke nwere ọmarịcha uwe mara mma yana uwe na usoro okomoko, emeela ka ndị na-agụ akwụkwọ na ndị na-ekiri ya ghara inwe ntụnye ndị ahụ. N'ezie, ị ga-enyerịrị mmetụ nke mmata nke ndị nzacha sepia ahụ na ihe onyonyo ahụ. Kedu ihe na-echere esemokwu anyị na-eto eto na-eto eto, ka anyị kwuo: nke akwụkwọ ọkọwa okwu.
Maka ndị ọzọ, enwere ike iji nkasi obi hụ ya, ọkachasị ọmarịcha ọmarịcha na ndị hụrụ usoro ochie.
En A3 Media na Netflix.
Ọnwụ - Maria Dueñas
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na María Dueñas enweghị ọrụ na-abụghị usoro. Nke a bụ ihe atụ ọzọ nke ezigbo ọrụ na ihe ịga nke ọma nke na-emegharị ọzọ Oge n'etiti etiti oro ama anam enye ọwọrọ etop. Ọzọkwa site na dara oké ọnụ vintage mmepụta, na-ewepụ mmefu na mpụga na ezumike, Ọnwụ kpokọta a mba nkedo nke ndị isi, Spanish Eleanor Watling na onye colombian rafael novoa, ndị na-ele ezigbo anya na ọrụ ha, na ndị na-eso nnukwu ụlọ akwụkwọ sekọndrị dịka Emilio Gutiérrez Caba na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị ga-etinye ma, ọkachasị maka onye na-ekiri ekiri ahụ amachaghị asụsụ Shakespeare, ọ nwere ike ịbụ eziokwu ahụ akụkụ nke mkparịta ụka ahụ dị n'asụsụ Bekee ị ga-agagharị na-agụ ndepụta okwu. Ma ọ bụ nke kasị nta. Ihe kachasị mkpa bụ na ọ bụ ezigbo mmepụta banyere akụkọ banyere ịhụnanya, agụụ na aghụghọ.
Onye aka ya di ocha - Harlan Coben
Harlan Coben, na mgbakwunye na ịbụ a na-aga n'ihu Dị ka onye edemede, ọ na-enwe obi ụtọ na a na-emegharị otu akwụkwọ akụkọ ya, na onye ọzọ na mpaghara niile na asụsụ niile. agwala ndị bịara abịa okwu, Nchekwa o Ohia n'ime, niile na Netflix bụ ihe atụ. Ugbu a ọ bụ oge anyị na usoro Spanish a nke 8 isi onye na-apụta na ụlọ mario, Aura garrido y Jose Coronado n'etiti ndị ọzọ.
Enwere m olile anya na otu ubochi ha gha emeghari usoro ihe omuma ya banyere akwukwo Myron bolitar.
Ọzọkwa na Netflix.
bosch (Oge 7) - Roomlọ na-ere ọkụ - Michael Connelly
Mkpokoro na style ka otu n'ime ndị uwe ojii kacha mma enwere ike ịhụ nke ahụ ugbu a na nyiwe. M na-ekwu banyere ya N'isiokwu a. Ugbu a, ha kwụsịrị ya, ọ bụ ezie na ọ bụghị kpamkpam, na oge 7 a nke na-adịghị ada mbà na ndị na-ekiri na ndị na-agụ akwụkwọ bụ ndị soro usoro a na ntinye. Oge a na-agbanwe akụkụ nke atụmatụ nke edemede mbụ Roomlọ na-ere ọkụ, nke nọmba 19 nke ogologo na-aga nke ọma saga na-ahụ ndị uwe ojii dị njọ, ndị na-arụ ọrụ nke ọma ma dị ike nke LAPD Harry bosch, ọzọ ebube Taịtọs Welliver.
Ndi ozo 8 isi Nkeji 45 na-ahụ na marathon nwayọ ebe ọ dighi kwa atụmatụ ma-ọli ahihia fọduru. Na nkenke, ọ bụghị otu nkeji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya » Agụ na-ele ma ọ bụ usoro na-agụ. Nhọrọ
Aha nke rose